Acoustic Panels များကို သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း - သတင်း - Suzhou Soundbetter Architectural Materials Co., Ltd.
Acoustic Panels များကို သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအသံစုပ်ယူနိုင်သော အကန့်များ
1. သန့်ရှင်းသော စိုစွတ်သောအ၀တ်စ သို့မဟုတ် ရေမြှုပ်ကို အသုံးပြု၍ မီးမထိန်းနိုင်သော အသံစုပ်ယူမှုရှိသော panel ၏ မျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းရန် ကြားနေဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် ဆပ်ပြာရည်တွင် နှစ်မြှုပ်ပါ။ ဖောက်ထွင်းခံရသော ပေါင်းစပ်မီးတောက်-မထိအောင် အသံစုပ်ယူနိုင်သော panel ၏ မျက်နှာပြင်ကို ပျက်စီးစေမည့် ပြင်းထန်သော အက်ဆစ်နှင့် ပြင်းထန်သော အယ်လ်ကာလိုင်း ပစ္စည်းများ မသုံးပါနှင့်။
2. အစွန်းအထင်းများကို သန့်စင်ရန် ပိုမိုခက်ခဲသည့်အတွက်၊ သင်သည် သန့်စင်ရန်အတွက် ကြားနေအိမ်သုံး ဆပ်ပြာဖြင့် အပျော့စား ကြမ်းတိုက်ထားသော ဘရက်ရှ်ကို အသုံးပြု၍ မျက်နှာပြင်ကို ပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ရန် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်၏ အရွယ်အစားကို အာရုံစိုက်ပါ။
3. ကြမ်းတမ်းသောအစွန်းအထင်းများအတွက်၊ စားသုံးနိုင်သောဆိုဒါနှင့်ရေနှင့်အတူ အပျော့စားအမာရွတ်ရှိသော ဘရပ်ရှ်ကိုအသုံးပြုကာ အစွန်းအထင်းအများစုကို ဖယ်ရှားရန် 10-20 ကြိမ် သုတ်ပေးပါ။ စားသုံးနိုင်သော ဆိုဒါသည် အညစ်ကြေးနည်းသော်လည်း၊ အားအလွန်အကျွံ သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံ သုတ်ခြင်းသည် အထူးသဖြင့် တောက်ပြောင်သော ပေါင်းစပ်မီးတောက်များကို တောက်ပြောင်သော ချောမွတ်သော ပေါင်းစပ်သံစုပ်ခြင်းအကန့်အတွက် အပေါက်ဖောက်ထားသော ပေါင်းစပ်အသံစုပ်ခြင်းအကန့်၏ မျက်နှာပြင်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
4. သံချေးတက်ခြင်းတွင် သံချေးတက်သော ဓာတုပစ္စည်းများပါ၀င်သည်၊ ၎င်းသည် ဖောက်ထွင်းခံရသော ပေါင်းစပ်မီးတောက်၏ မျက်နှာပြင်ကို ချက်ချင်းပျက်စီးစေမည့် အသံစုပ်ယူမှုရှိသော panel မှဖြစ်သည်။ ဖိတ်စင်သွားပါက အကြွင်းအကျန်အားလုံးကို ချက်ချင်းသုတ်ပါ၊ ဆပ်ပြာရည်ဖြင့် ဆေးကြောပါ၊ သန့်ရှင်းသောရေဖြင့် အကြိမ်များစွာ ဆေးကြောပါ။
5. သံမဏိသိုးမွှေးနှင့် အခြားအရာများသည် ဖောက်ထွင်းခံရသော ပေါင်းစပ်မီးတောက်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အသံစုပ်ယူနိုင်သော အကန့်ကိုလည်း ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ သတ္တုသည် သံချေးတက်ပြီး acoustic panels များ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အစွန်းအထင်းများကျန်နေသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဖောက်ထားသော ပေါင်းစပ်မီးတောက်များကို သန့်စင်ရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ပေါ်တွင် သံမဏိသိုးမွှေးကို သိမ်းဆည်းရန် ၎င်းတို့ကို မသုံးပါနှင့်။
လွန်ခဲ့သော:Acoustic Panels ပစ္စည်းများ ရွေးချယ်ခြင်း။
နောက်တစ်ခု:Indoor Space Acoustic Panels ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ